Izixazululo zeLashing Cargo | I-Narrowtex
by I-DevNarrowTex	 December 29, 2014
INarrowtex inikeza izixazululo ezahlukahlukene zokuthola imithwalo yokuvikela ukukhanya kwimithwalo yemithwalo esindayo. Sakha izixazululo eziningi zokubopha nokushaya izixazululo ukuze sivikele imithwalo yezisindo nobubunjwa obuhlukahlukene. Izixazululo zethu zokushaya impahla zithunyelwa emazweni ahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Ibanga lethu lokubopha lifaka phakathi i-Narrostrap yethu enelungelo lobunikazi okuyi-polyester yethu eboshwe futhi ukubopha okuhlanganisiwe. Ukusuka kububanzi obuhlukahlukene, amandla okuphuka i-Narrostrap isetshenziselwa ukuvikela ukukhanya okuya emithwalweni esindayo ukuya esindayo.
INarrowtex isithole idumela lokuba “uchwepheshe wezixazululo zokushaywa” ngohlu lwayo lokuqhuma okwelukiweyo kwe-polyester, okwaziwa nangokuthi yiNarrolash, ukuthola izixazululo zomthwalo ophakathi nendawo osindayo.
Esinye sezizathu zokuthandwa kwezixazululo zokuthwala imithwalo ezisuka kwaNarrowtex, ukubopha nokubhabha okushintshiwe. INarrolash neNarrostrap ingadaywa kunoma imuphi umbala noma iphrintwe kuyo, ukukhombisa ubunikazi benkampani kanye namandla okuphula. Lokhu kwehlukanisa umkhiqizo wethu kakhulu njengoba unikeza ukufaka uphawu enkampanini mahhala.
Ukuxoxa ngezidingo zakho zokushaya izixazululo zempahla ngokuningiliziwe, sicela usishayele kule nombolo: +27) 36 352 3108. Sizojabula kakhulu ukukusiza futhi sibheke phambili ukukusiza ngokuqhubekayo.
Ungafunda futhi nendatshana yethu eyedlule: Abenzi Bewebhu.